GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greenlandic Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Ukrainian Vietnamese
Ọ BỤ ezie na ọ dịghị adịte aka, ị pụrụ ịdị na-echeta ya ná ndụ gị nile. Ọ bara nnọọ uru, ma ọ dịghị onye dara ogbenye ruo n’ókè nke na ọ pụghị imere ya onye ọzọ ma ọ bụ baa ọgaranya ruo n’ókè nke na ọ dịghị ya mkpa. Gịnị ka anyị na-ekwu banyere ya? Ọ bụ mmụmụ ọnụ ọchị.
Iji mụmụọ ọnụ ọchị, uru ahụ́ mmadụ ga-ekwegide ekwegide bụ́ nke na-eme ka anya gbukepụ egbukepụ, na-emekwa ka akụkụ ọnụ gbalitetụ elu n’ụzọ na-egosi obi ụtọ. N’ime izu ole na ole mbụ mgbe a mụsịrị nwa ọhụrụ, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị, nke a kwa na-atọ nne na nna ọhụrụ ahụ ụtọ. Mmụmụ ọnụ ọchị ndị mbụ a na-abịara onwe ha. Ndị ọkachamara na-akọwa na a na-amụmụkarị ụdị ọnụ ọchị a n’oge mmadụ na-arọ nrọ, o yikwara ka ihe na-akpali ya ọ̀ bụ mmetụta uche na ihe ndị na-eme n’usoro ịrụ ọrụ nke ụbụrụ na akwara. Ọbụna mgbe anyị meworo okenye, anyị ka pụrụ ịmụmụ ọnụ ọchị na-abịara onwe ya mgbe anyị risịrị nri ma ọ bụ mgbe anyị na-ege egwú.
Otú ọ dị, malite mgbe nwa ọhụrụ dị izu isii, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị ma ọ hụ ihu mmadụ ma ọ bụ nụ olu mmadụ. Ọnụ ọchị ‘a mụmụụrụ ndị mmadụ’—ọnụ ọchị a na-ama ụma amụmụ—na-eme ka anyị nwee ihu gbachapụrụ agbachapụ, ma ànyị bụ́ ụmụ ọhụrụ ma ànyị bụ́ ndị meworo okenye. A na-ekwu na mmụmụ ọnụ ọchị dị otú ahụ na-enwe mmetụta dị mma ọbụna n’ahụ́ ike anyị. Dị ka ndị na-agwọ nsogbu ikwu okwu, bụ́ Mirtha Manno na Rubén Delauro, bụ́ ndị nwere ụlọ ahụ́ ike ndị mmadụ na-amụ inyere onwe ha aka n’ụzọ ahụ́ ike, bụ́ nke a na-akpọ Ịmụmụ Ọnụ Ọchị na Ahụ́ Ike, si kwuo, nanị ịmụmụ ọnụ ọchị na-emepụta ihe mkpali na-emetụta akụkụ ahụ́ bụ́ pituitary gland. Akụkụ ahụ́ a, n’aka nke ya, na-emepụta endorphin, bụ́ mmiri ọgwụ na-adị n’ụbụrụ nke na-eme ka anyị nwee obi ụtọ.
Ihe ọzọ dị mkpa mere o ji kwesị ka anyị na-amụmụ ọnụ ọchị bụ mmetụta ọma ọ na-enwe n’ahụ́ ndị ọzọ. Mmụmụ ọnụ ọchị sitere n’obi na-egosipụta mmetụta anyị n’ekwughị okwu, ma ọ̀ bụ ịmụmụ ọnụ ọchị iji kelee ekele, iji gosi ọmịiko, ma ọ bụ iji nye agbamume. Mgbe ụfọdụ, nanị foto nwatakịrị na-amụmụ ọnụ ọchị n’ụzọ na-akpali mmasị pụrụ ime ka anyị mụmụọ ọnụ ọchị.
Mgbe mmadụ ji ihu enyị mụmụọrọ anyị ọnụ ọchị, ọ pụrụ inyere anyị aka inwekwu ahụ́ iru ala, ịnagidekwu nkụda mmụọ ma ọ bụ ihe ịma aka. Bible na-atụ aro, sị: “Egbochila ezi ihe ná ndị ọ dịịrị, mgbe ọ dịịrị ike aka gị ime ya.” (Ilu 3:27) Ee, site n’ime ihe a dị mfe, anyị pụrụ irite uru, meekwa ka ndị ọzọ rite uru. Gịnị ma i mee mgbalị iji soro ndị ọzọ kerịta onyinye a bara nnọọ uru—mmụmụ ọnụ ọchị sitere n’obi?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ike nke Mmụmụ Ọnụ Ọchị